iOS အတွက် Gmail ကိုအဓိက update ကိုရရှိသွားတဲ့ပေမယ်အသုံးပြုသူများကိုမပျော်ရွှင်နေကြသည် - သတင်း Rule
iOS အတွက် Gmail ကိုအဓိက update ကိုရရှိသွားတဲ့ပေမယ်အသုံးပြုသူများကိုမပျော်ရွှင်နေကြသည်
အင်တာနက်ကုမ္ပဏီကြီး Google ကနောက်ဆုံးအီးမေးလ် client ကိုနောက်ခံရဲ့ Refresh ဖြစ်စေသော iOS အတွက်၎င်း၏ Gmail app ကိုများအတွက်အဓိက update ကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်, သို့သော်၎င်း၏အသုံးပြုသူများအတွက်ကအကြောင်းမပျော်ရွှင်နေကြသည်.
Google ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့ပေါ်တွင် update ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာ, iPhone နှင့် iPad များအတွက် Gmail ကိုယခုတစ်နောက်ခံရဲ့ Refresh feature ကိုဂုဏ်ယူကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆို, သောအီးမေးလ်များဖွစျလိမျ့မညျကိုဆိုလိုသည် “Pre-မရယူ” သင် app ကိုဖွင့်လှစ်သောအခါကြည့်ရှုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေ.
Google ကဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာအမျိုးသမီး Melissa Dominguez မနေ့ကဘလော့ဂ်ပို့စ်တွင်ပြောကြားခဲ့သည်, “သငျသညျနံနက်ယံ၌သို့မဟုတ်သင်ကုန်စုံစတိုးဆိုင်မှာလိုင်းထဲမှာစောင့်ဆိုင်းနေအဖြစ်သင့်အီးမေးလ်ပထမဦးဆုံးအရာစစ်ဆေးနေပါတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်, သငျသညျတတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်သင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုရချင်. ဂျီမေးလ်က iOS App ကိုမှဒီနေ့ရဲ့ update ကိုအတူ, ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကြောင့်လုပ်ဖို့ပိုမိုလွယ်ကူနေပါတယ်။”
ဒီ feature အသစ်က iOS လိုအပ်ပါတယ် 7, နှင့်သုံးစွဲသူများလည်းရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည် “နောက်ခံ app ကိုရဲ့ Refresh” အပေါ် switched. သို့သော်, အချို့သောနှောငျ့ယှကျချင်မပြုစေခြင်းငှါ, update ကို app ရဲ့အသုံးပြုသူများ app store ကိုပေါ်ကျော်သူ့အတွက်မြည်တမ်းဖို့အမြန်ဖြစ်သကဲ့သို့, တချို့ကသူတို့နာကျင်ကြောင်းဟုဆိုနှင့်အတူ ဘက်ထရီသက်တမ်း.
တစျခုမှာမပျော်ဂျီမေးလ်အသုံးပြုသူကဆိုသည်, “ဒီ update ကိုနောက်ခံ app ကိုလန်းဆန်းထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အလွန်လျင်မြန်စွာငါ့အဘက်ထရီသက်တမ်းကိုသတ်. app ကို၏ကျန်နေတုန်းပဲကောင်းလှ၏, ဒါပေမဲ့ငါသည်ငါ့ဘက်ထရီဘို့အလိုငှါနောက်ခံရဲ့ Refresh ကို turn off ခဲ့ရသည်။”
iOS ကို update ကိုများအတွက်ဂျီမေးလ်ကိုလည်းနှင့်အတူမျိုးစုံကို Gmail ကိုကို iOS app များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုဖြတ်ပြီးအတွက်လက်မှတ်ထိုးထောက်ခံတတ်၏.
“အဆိုပါ Gmail app ကိုလည်းယခုလက်မှတ်ရေးထိုး-in ကို Google က iOS ကို app များကိုဖြတ်ပြီးထောက်ခံပါတယ်, Maps ကိုအပါအဝင်, မောင်း, Youtube ကိုနှင့် Chrome,” Google ကရှင်းပြခဲ့သည်. “တဦးတည်းအတွက် Sign, သင်တို့ရှိသမျှဖို့အတွက်လက်မှတ်ရေးထိုးပါလိမ့်မယ် (ဒီလည်းထွက်လက်မှတ်ထိုးဘို့အလုပ်ဖြစ်တယ်). ဒါကြောင့်သင် 27-ဇာတ်ကောင် password ကိုရိုက်ထည့်ပါသို့မဟုတ်သင့် 2-Step Verification code ကိုသင်သည်အခြား Google က app ကိုမှ navigate အခါတိုင်း retrieve ရန်ရှိသည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။”
သို့သော်, အသုံးပြုသူများသည်ဖြစ်စေဤအကြောင်းကိုလည်းမပျော်ရွှင်နေကြသည်, ထိုအင်္ဂါရပ်လုပ်မလုပ်ကြောင်းနှင့်အချို့သောပြောဆိုချက်ကို.
“ငါကမရှိတော့၌ငါ့ကို logging ရဲ့ app ကို update လုပ်မယ့်က update ကိုအရင်ကထက်အများကြီးပိုနှေးင်ကတည်းက,” တဦးတည်း miffed အသုံးပြုသူ wrote.
ဤဆောင်ပါး, iOS အတွက် Gmail ကိုအဓိက update ကိုရရှိသွားတဲ့ပေမယ်အသုံးပြုသူများကိုမပျော်ရွှင်နေကြသည်, ကနေစုစည်းတင်ဆက်သည် အဆိုပါ Inquirer နှင့်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဤနေရာတွင် posted ဖြစ်ပါတယ်.
20882	0 အပ္ပလီကေးရှင်းစတိုး, Gmail ကို, Google က, Inquirer, IOS ကို, iPad, iPhone ကို, YouTube ကို
← 10 နှလုံးရောဂါများအတွက်ထိရောက်သောသဘာဆေးတစ်လက် '' အဘယ်သူမျှမပြောင်းလဲမှု’ Schumacher အခြေအနေ →